Fanahy | Janoary 2022
Tanjona ara-panahy 8 tokony hapetrakao izao
Ny fametrahana tanjona dia mety amin'ny fitomboanao ara-panahy toy ny zavatra hafa rehetra. Ireto misy ohatra 8 amin'ny tanjona ara-panahy mety apetrakao.
Ahoana ny fomba hifandraisana sy hiasa amin'ny fitarihan'ny fanahinao
Angamba efa naheno momba ny fitarihan'ny fanahy ianao, saingy tsy azonao antoka ny momba azy ireo na ny fomba hihaonana, hifandraisana ary hiresahana amin'izy ireo. Manana ny valin'ny fanontanianao rehetra izahay.
Ahoana ny fomba hahatratrarana an'i Nirvana amin'ny alàlan'ny fandehanana amin'ilay làlana valo mahery
Te hanana fanjakana Nirvana ve ianao? Amin'ny Buddhism, ny fanarahana ny làlana Noble Eightfold dia lakilen'ny fanatontosana io hazavana io.
Iza aho? Ny valiny bodista lalina amin'ity fanontaniana mahaliana ity
'Iza aho?' Izy io dia fanontaniana apetratsika rehetra amin'ny tenantsika amin'ny fotoana sasany mandritra ny fiainantsika? Iza aho ao anatin'ny tontolon'ity tontolo midadasika ity? Inona aho? Fa maninona aho no iza? Andeha hojerentsika izay lazain'ny Buddhism momba ity raharaha mahaliana ity.
Ahoana no mety hahatonga ny havizananao handreraka ny havizanana
Sahirana ve ianao hihazonana ny herinao sy ny antony manosika anao? Mety ho tratry ny havizanana ve ianao? Fantaro eto bebe kokoa momba an'io aretina io.
Fanontaniana kely 5 izay afaka mamoha ny fanahinao
Matory ve ny fanahinao? Te hanaitra azy ve ianao? Ny fametrahana ireto fanontaniana 5 ireto matetika araka izay azo atao dia hamporisika ny fanahinao tsy hatory lava.
Toetoetran'ny olona matotra ara-panahy
Matotra ara-panahy manao ahoana ianao? Ireo toetra sy toetra eto dia mamaritra olona matotra ara-panahy lehibe. Iza amin'ireo no mila iasanao?
Karazana olona 4 no tena iharan'ny krizy misy ankehitriny
Ny karazan'olona sasany dia ahiana hiaina krizy misy noho ny hafa. Ireto misy vondrona 4 izay atahorana ho ambony indrindra amin'ny rehetra.
Ahoana ny fomba hisorohana ny fandrika krizy misy mandritra ny fotoana fitomboan'ny tena manokana
Mandritra ny vanim-potoanan'ny fitomboan'ny tena manokana sy ny ara-panahy dia misy ny tena atahorana ho latsaka ao anatin'ny vela-pandrika amin'ny krizy misy. Azonao atao ny misoroka azy toy izany ...
Famantarana 6 ianao dia ao anatin'ny krizy krizy misy ankehitriny
Ny krizy misy dia miavaka amin'ny fahatsapana tsy misy dikany sy tsy fahampian'ny fitarihana, saingy ireto misy famantarana 6 hafa mety hijaly anao.
Ahoana ny fomba hahitana dikany amin'ny famonoan-tena amin'ny olon-tiana
Ny alakamisy 21 jolay 2011 dia nandao ny asany aloha ny zanako lahy roapolo taona ary tsy nody intsony. Enina andro taty aoriana dia hita ny fatiny.
Rehefa mahatsiaro ho sarotra ny fitomboana: fampifanarahana, fanoherana ary ny dian'ny mahery fo
Ny fitomboana manokana sy ara-panahy dia mahalana dia mandeha milamina; hiatrika fanoherana ianao, hihaona amin'ny fampifanarahana, ary handeha amin'ny lalan'ny maherifo.
Famantarana 12 fa miova amin'ny fahatsiarovan-tena avo kokoa ianao
Miova amin'ny fahatsiarovan-tena avo kokoa ve ianao? Raha mahita ny ankamaroan'ireo famantarana 12 ireo ianao, dia azo inoana fa nanomboka ny fiovana.
Finoan'ny bodista 4 izay hanova ny fahatakaranao ny fiainana sy hahatonga anao ho sambatra kokoa
Ireo finoana sy foto-pinoana bodista ireo dia afaka manova ny fomba fisainanao sy ny fihetsikao, hampihena ny fijalianao ary hanatsara ny fahasambaranao.
Fomba 9 mahatonga ny fiarahamonina maoderina mampihetsi-po
Ny fomba fiainantsika eo amin'ny tontolon'ny maoderina dia antony lehibe iray mahatonga ny tsy fisian'ny dikany izay mararin'ny olona maro amin'ny fiainany.
Toetran'ny fanahy taloha - Iray ihany ve ianao?
Ny maha-olona antitra dia tsy misy ifandraisany amin'ny vanim-potoana, ny ankizy sy ny olon-dehibe dia mety ho iray, ary manao olona tsara tarehy izy ireo.
Famantarana 9 manana toetra mampatanjaka adaladala ianao nefa somary saro-pady
Ny fananana toetra matanjaka sy mora tohina miaraka amin'izay dia sarotra, saingy maro no tsy maintsy miatrika an'izany isan'andro. Anisan'izany ve ianao?
Fomba 15 andefasan'izao rehetra izao hafatra - famantarana tokony hotandremana
Fantatrao ve ireo fomba maro rehetra izay andefasan'izao rehetra izao hafatra sy famantarana? Zahao ny 15 amin'ireo fahita indrindra ary araho maso izy ireo.
Mitady ny dikan'ny fiainana any amin'ny toerana tsy mety ve ianao?
Mahatsapa tsy fahampiana dikany ve ianao amin'ny fiainanao? Angamba ianao tsy mijery amin'ny toerana mety. Ity misy fanoroana izay ahafahana mahita ny dikany.
Zavatra 3 ny saka afaka mampianatra antsika momba ny bodisma
Ny namantsika saka dia afaka mampianatra antsika betsaka momba ny fomban'ny Buddha. Ireto zavatra 3 ireto dia tendron'ny iceberg fotsiny.
fomba fanamboarana aorian'ny ady
ahoana no hahafantaranao raha tianao ny olona iray
ahoana no hamaly ny bandy matoatoa anao
hiranay lohahevitra wwe ray miverina
ahoana no ilazanao amin'ny olona iray hoe tsy tiako intsony izy ireo